UHelena Tur. Ingxoxo nombhali weGazi Elibi | Izincwadi Zamanje
UHelena Tur. Ingxoxo nombhali weBad Blood
UMariola Diaz-Cano Arevalo | 04/10/2021 12:00 | Kubuyekezwe ku- 30/09/2021 15:46 | Izingxoxo, Abalobi
Izithombe: ngezilokotho zika-Helena Tur.
A UHelena Tur yaziwa nangokuthi i- UJane kelder, igama-mbumbulu asayine ngaphansi kwalo iziqu eziningana ze- amanoveli ezothando kusethwe esikhathini se- Regency yaseBrithani ngekhulu le-XNUMX, ngenxa yokuthanda kwakhe izincwadi zesiNgisi zangalelo khulu leminyaka. Uthisha, manje usekhefini lokubhala, sayina eyokuqala negama lakhe, Igazi elibi, ekhishwe ngonyaka odlule. Ubenomusa ngokwanele ukunginikeza le ngxoxo lapho esitshela khona ngaye nangakho konke okuncane.
UHelena Tur - Ingxoxo
UMBHALO MANJE: Isihloko senoveli yakho sithi Igazi elibi. Usitshelani ngakho futhi umqondo wavelaphi?
U-HELENA TUR:Empeleni isihloko sithi Igazi elibi, kodwa sanquma ukudlala ngokungacaci kwekhava. Kuyinto I-thriller yezomlando eqanjiwe yasungulwa eLas Médulas ngo-1858. Ngenkathi i-Civil Guard isatshalaliswe endaweni ukuvimbela ukuhlaselwa kuka-Isabel II, ozodlula lapho kungekudala, amantombazane aphuma igazi aqala ukuvela ku-El Sil. Lokho kuqondana nokufika kwe- intandane encane ngubani ozonakekela intombazane eyisithulu, indodakazi yomnikazi wepulazi lezinyosi. Kepha, ekuzimiseleni kwakhe ukumvikela, kancane kancane uzongena emlonyeni wempisi. Umbono wokuqala, lapho konke okunye kwakwakhiwe khona, kwakuyisisusa sobugebengu. Ukusuka lapho, nasekubhaleni okuhlukile, izinhlamvu zavela futhi umbhalo wahlanganiswa ndawonye.
I-HT: Ngiseyingane, umkhulu wami wayehlale enginikeza izincwadi ezikhuluma ngezilwane. Babefundisa, bengekho ukulandisa. Ngicabanga ukuthi incwadi yokuqala elandisayo engiyifundile yayihlanganisa izindaba ezimfushane ezibandakanya INkosi ijabule, ngu-Oscar Wilde, futhi naye ngakhala okomdanso amasonto.
Into yokuqala engikhumbula ukuyibhala kwaba ngeminyaka engu-9. Futhi, kusuka ku- incwadi yezindaba, ngibe sengizifingqa futhi Ngazihlomisa ngendlela yezothando. Izinto zokulwa nesithukuthezi njengengane okuwukuphela kwayo, ngicabanga kanjalo.
I-HT: Ngihlala ngiphindela emuva Nietzsche, UVicente Valero, IMallarme, Rilke, KAFKA, UThomas indoda, UJane U-Austen… Ngigxile ekufundeni kabusha kunokuthola.
I-HT: Ngiyayazi le: Nkosi henry, of Isithombe sikaDorian Grey. Ngikuthola kuthakazelisa.
I-HT: para bhala, kuyadingeka yazi ukuthi nginesikhathi ngaphambili. Angikwazi ukubhala ngezikhathi ezingahleliwe, kunzima ukufaka umbhalo wakho kangangokuthi angifuni lutho oluzongisusa.
Ukuze ufunde, noma kuphi, kunomsindo, abantu bayakhuluma noma yini. Nginqamula emhlabeni kalula.
I-HT: para bhala, Ngenza kangcono i ekuseni (Ngisheshe ngavuka) futhi, nakanjani, ngisehhovisi lami futhi nginekhompyutha endala. Angiyena umuntu wokuthatha i-laptop noma yikuphi. Ngoba i-leer, akukho mzuzu omubi.
I-HT: Ngithanda konke enginakho ikhwalithi, izinhlobo zimane nje ziyilebula. Kepha, ukuzisebenzisa, kunezinto ezimbili engingakwazi ukuzenza ngazo: ukuzisiza nokuzikhathaza.
I-HT: Manje ngangifunda kabusha Okubomvu nokumnyama, kusuka kwaStendhal, kepha ngiyiphazamisile ukuze ngifunde Umbulali ongekho emthethweni, nguCarlos Bardem, ngoba kufanele ngenze inkulumo phakathi kwakhe noDomingo Villar.
Ngasikhathi sinye, ngingu-rukubhala inoveli yohlobo lwe-athagatha Christie, yize inenhlanganisela yezinhlobo, esethwe eVilla de Ochandiano ngo-1897. Angazi namanje ukuthi izobizwa kanjani.
I-HT: Abashicileli, ngaphandle, yizinkampani ezithi bafuna ukuthengisa futhi baphoqeleka ukuthi babheke i- ibhalansi phakathi kwenzuzo nekhwalithi. Manje, i-panorama igcwaliswe ngabantu bezindaba abanikeza imiphumela emihle, kepha, ngenhlanhla, kukhona amathuba abantu ongabazi (ukuqhubeka kuzoncika ekuthengisweni, kunjalo).
Bengihlale ngibhala, kepha Nginqume ukushicilela eminyakeni embalwa edlule ngoba nginguthisha wesikole esiphakeme futhi wafuna ukubaleka lowo ofikile phezu kwethu. Kunzima kakhulu ukubona ukuthi ududulwa kanjani ukuphatha abantu abahlakaniphile sengathi bayiziphukuphuku baze babe yizilima. Kubuhlungu kakhulu.
I-HT: Ngisebenzise ithuba ngacela eyodwa hamba futhi ngisebenzisa isikhathi ukubhala. Nginesizotha kakhulu futhi ukuvalelwa kungangithintanga kakhulu. Kepha kunjalo Angizizwa ngifuna ukubhala lutho ngobhadane, Ngicabanga ukuthi sekukhona ukukhathala okujwayelekile mayelana nokushoda kokujwayelekile.
Indlela ephelele ye-athikili: Izincwadi Zamanje » Literatura » Izingxoxo » UHelena Tur. Ingxoxo nombhali weBad Blood
Izincwadi ezinconyelwe ukuwa
Okthoba. Ukukhethwa kwezindaba zokuhlela